Soavaly eo amin'ny tontolon'ny Skytianina: fiompiana sy fampiasana. | Soavaly Noti
Ny Skytianina dia mpifindrafindra monina Iraniana izay nifindra nanaraka ireo steppe Eurasia nandritra ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK ary hatramin'ny taonjato faha-XNUMX taorian'i Kristy. Nodinihina izy ireo iray amin'ireo firenena voalohany nahafehy ny ady amin'ny soavaly, fa tsy izany ihany.
Fianarana iray navoaka efa ho roa taona lasa izay Science, nanambara izany Ireo Skadistianina mpifindrafindra tamin'ny vanim-potoana vy dia efa nanao fanabeazana soavaly voafantina.
Moa ve isika mandinika ny tantara nozarain'ny Skytianina tamin'ny soavaly?
Ny Scythians dia tsy nieritreritra fiainana na fahafatesana raha tsy nisy soavaly. Matetika no noravahan'izy ireo ny rambon'ny bibiny tamin'ny alàlan'ny rojo vy azy ireo mba hahatonga azy ireo ho toy ny bibilava bibilava.
Mpiandry ondry skytianina no nitety ny steppe an'i Azia afovoany teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy XNUMX tal. Nipetraka tao anaty sarety feno tranolay izy ireo. Ireo Skytianina ireo nanatanteraka ny fiompiana soavaly izy ireo mba hahatratrarana biby izay nifanaraka tamin'ny fomba fiainany sy ny fitakian'izy ireo.
1 Ny fitaizan-tsoavaly an'ny Skytianina
2 Inona no nampiasan'ny Skytianina soavaly?
3 Nanao ahoana ny ady Skytianina?
Ny fitaizan-tsoavaly an'ny Skytianina
ny mpikaroka nandinika ny sisan'ny soavaly avy tany am-pasana tena misy ny Skytianina, izay tao anatin'ny toetoetra voajanahary fiarovana. Ny isan'ny santionany hita ao am-pasana dia betsaka, ao amin'ny iray amin'izy ireo dia maherin'ny 200 ny soavaly hafa hita.
Araka ny lahatsoratr'i Hérodote ao amin'ny fombafomba fandevenana any Skta, dia soavaly natolotry ny foko mpiray dina no natao sorona. Ity dia manazava ny ampahany santionany be dia be hita sy ny karazany. Ny ankamaroan'ireo zana-tany any amin'ireo fasana ireo dia tsy misy ifandraisany.
Ny fitsapana ny ADN dia a fahasamihafana lehibe eo amin'ny sosona amin'ireo soavaly Skytianina, izay isan'izany: mainty, chestnut, chestnut, crème ary sosona voaloto.
Hita ihany koa fa tsy nitondra ny mutation tompon'andraikitra amin'ny trot hafa, na dia misy aza ny fiovana mifandraika amin'ny hafainganam-pandehan'ny soavaly ankehitriny. Tsy isalasalana fa ny Skytianina nankasitrahan'izy ireo ny fiaretana sy ny hafainganan'ny soavaliny.
Ny soavaly namboarina voalohany dia nidina tamin'ny soavaly maromaro, na dia very aza io fahasamihafana io rehefa nandeha ny fotoana.
Ny zava-misy mahaliana iray hafa izay hita dia ny Skytianina notazonin'izy ireo ny firafitry ny soavaly voajanahary noho ny olona vitsivitsy. Mifanohitra tanteraka amin'ny ankehitriny izy io, izay ampiasana soavaly tokana amin'ny hazofijaliana marobe ary vokatr'izany dia saika ny soavaly rehetra ankehitriny dia mitovy karazana haplotype chromosome Y.
Ny ankamaroan'ny fototarazo ampiasaina, 121 ny fitambarany, dia manondro ireo tongolo mialoha, zavatra iray izay mifanaraka amin'ny haben'ny taolana ihany koa. Soavaly matanjaka izy ireo.
Noho izany dia afaka milaza izany isika nanomboka 5.500 XNUMX taona lasa teo ny fiompiana soavaly.
Inona no nampiasan'ny Skytianina soavaly?
Asehon'ny fanadihadiana fa efa fanaon'ireny biby ireny taloha mihinana ny nofony ary misotroa ny ronono (araka ny hita amin'ny sary lehibe amin'ny lahatsoratra). Midika izany fa misy biby voafantina manokana izay nitombo ny vanin-taonan'ny fampinonoana, zavatra iray izay hita noho ny fandinihana ny fototarazo. Ankoatra ny ronono nanao fromazy izy ireo ary Koumiss, zava-pisotro misy alikaola vita amin'ny yaourt.
Ny kolontsaina Scythian dia nifamatotra akaiky tamin'ny ady. Nofaritan'ny fahavalony ho mpiady mahery setra sy mpandatsa-dra indrindra tamin'izany fotoana izany izy ireo. Ry zareo dia mpitaingin-tsoavaly lehibe sy mpandefa zana-tsipìka mahatsiravina eny an-tendrombohitra. Ny manan-kaja dia namorona miaramila soavalaly mpitaingin-tsoavaly, miaraka amina fiadiana sy akanjo tsara indrindra mety hialoha lalana amin'ny rindrin'ny mpitaingin-tsoavaly ho avy.
Nanao ahoana ny ady Skytianina?
Saika ny lehilahy rehetra efa lehibe sy ny vehivavy no nandray anjara tamin'ny ady. Mandeha mitaingin-tsoavaly ny ankamaroany, mamorona mpitaingin-tsoavaly mpandefa zana-tsipìka maivana., ny ambiny dia miaramila an-tongotra an-tongotra izay mahantra indrindra ary mpitaingin-tsoavaly mavesatra misy andriana sy ireo mpanaraka azy.
Tsy misy angon-drakitra antsipiriany na mivaingana voatahiry amin'ireo tetika nampiasain'izy ireo tamin'ny ady, saingy mazava fa ny soavaly dia nitana andraikitra lehibe tamin'ireny.
Toy izany no zava-dehibe lehilahy sy vehivavy mitaingina soavaly amin'ny pataloha natao ho azy ho an'io fiasa io. Nanamboatra ny lasely henjana ho an'ny mitaingina izy ireo. Ireto lasely ireto dia namboarina tamin'ny ampahany telo: voalohany izay niraikitra tamin'ny vatan'ny soavaly izay namono ny kapoka tamin'ny sisa tavela tamin'ny singa mba tsy hanimba ilay biby, karazana pad; teo amboniny, narafitra ny rafitra vita amin'ny tandindon'ny serfa na rantsana hazo; Farany, ny seza, ho toy ny padding hiarovana ny mpitaingina azy amin'ny kapoka, dia vita tamin'ny hoditr'ondry na hoditr'ondry feno volo biby.
Ny tampon'ireo havoana dia tsy hita popoka, tsy nisy aro-totozy, saingy mbola nitazona ny fandanjalanjany an'ilay biby ihany ireo mpitaingina. Ny Skytianina nitaingina fahaiza-manao soavaly tamina soavaly izy ireo tamin'ny fotoana tsy nanamboaran'ny andian-tsoavaly miaramila an'ady akory ny vahoaka eropeana. Izany dia nanome ny Skytianina tombony lehibe tamin'ny ady maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ny Skytianina sy ny fiompiana soavaly